सिप क्षमता योग्यता हुनेलाई तुरुन्त रोजगारी – गाउँपालिका
सिप क्षमता योग्यता हुनेलाई तुरुन्त रोजगारी
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १८, २०७६ समय: ६:०८:११
उदयपुर, १७ जेठ
प्रदेश नम्बर १ का सामाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सिप क्षमता योग्यता हुनेहरुलाई तुरुन्त रोजगारी पाउने बताए । आफुलाई सक्षम बनाउँदै योग्यता र क्षमताको बिकास गर्न सके रोजगारीको कुनै कमि नहुने मन्त्री घिमिरेको भनाई रहेको छ । अब उपान्त बैदेशिक रोजगारी स्वच्छाले मात्र जान परोस, बाध्यताले बैदेशिक रोजगारीमा जाने अबस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागि परेको मन्त्री घिमिरेको भनाई रहेको छ । यहि नै रोजगारीको अबसर सिर्जना गरिनेछ ।
अलि कति बृद्धि बिवेक भएका युवाहरु अमेरीका र युरोप पाखुरामा बल भएका युवाहरु खाडी मुलुक गएका छन् आज हाम्रा कतिपय गाँउघर युवा बिहिन भएको छ । बुद्धि भएकाहरु बृद्ध भएपछि स्वदेश फर्किन्छन, बल भएकाहरु बल सकिएपछि फर्किन्छन । यसरी सबै उर्जा बिदेशमा सकिएपछि बृद्ध अबस्थामा फर्किएकाहरुले कुनै काम गर्न सकिदैनन् । त्यसैले अब उपान्त बिदेश गएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै फकाउने कामको वातावरण सरकारले गर्दैछ ।
कृषिलाई ब्यवसायीक तथा यान्त्रिकरण गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्रौ, आफै उद्यमी बनौं, हाम्रा परम्परागत प्रणाली कृषि प्र्रणालीलाई परिर्वतन गरि आधुनिक प्रबिधिमैत्री प्रणाली अपनाउन सके हामीले चाहेको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारा साकार हुने थियो । जग्गा खण्डीकरण भएर टुक्रि सके, खेति योग्य जग्गा टुक्रयाउने काम बन्द गरौं, ठुलठुला पल्ट बनाएर सामुहिक खेति गरौं, नयाँ ढाँचा र प्रबिधिमैत्री भएर खेति गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री घिमिरेले हाम्रा समाज जागीरे मानसिकतामा छ, हामी सबै किसानका छोराछोरी हौं, तर अहिले एसएलसी पास गरेकाले हलो कोदालो गर्न हुदैनन् भन्ने मानसिकता छ । नयाँ पुस्तालाई श्रम प्रति कसरी आकर्षित गर्ने, आजको हाम्रो चुनौती हो । हाम्रा छोराछोरीलाई हलो काँधमा राखि खेतिमा जा भन्दा उ जादैनन् तर आधुनिक प्रबिधिद्धारा ट्रयाक्टरको चाबी दिएर खेतमा पठाउन सके उ तुरुन्त जान्छन् । त्यसैले बिज्ञान र प्रबिधिको युगमा कृषि पेशालाई पनि आधुनिकिकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए । हाम्रा बाबु बाजेले जिबिका मुखि खेति प्रणाली गर्दै आएको थियो । आफै कमाउने आफै खाने कसैलाई दिनु पर्दैन्थ्यो । तर अब कृषिलाई उद्योगको रुपमा बिकास गर्नु पर्दछ ।
हरेक नागरिकलाई राज्यले रोजागारीको ग्यारेण्टी गरेको छ, सरकारले रोजगारी दिनै पर्दछ, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भक्ता दिनु पर्ने हाम्रो संबिधानमा ब्यवस्था गरेको छ । हाम्रो गलत शिक्षा प्रणालीले गर्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । शिक्षलाई सुधार गरि स्वरोजगार हुने शिक्षा प्रणालीको बिकास गर्न पर्नेमा जोड दिए । प्राविधिक शिक्षाको अभाबमा स्वरोजगार बन्न नसकेकाले हाम्रो सामाजिक मानसिकता नै जागिरे रहेको छ । त्यसैले हामी जागिरका लागि मन्त्री, सासदको ढोका धाउँछौं र जागिरका लागि भौतारिन्छौं । रोजगार भनेकै जागीरे हो, भन्ने लाग्दछ, तर स्वरोजगार बन्नेले जागिरेले भन्दा बढी कमाउँछन । अब जागिरे मानसिकतालाई त्यागेर श्रम गर्ने र स्वरोजगार बन्ने तिर लागौं ।
अब सामुहिक ब्यवसाय गर्ने बानिको बिकास गरौं, समुहबाट पूर्जि आर्जन गरौं, समुहबाट शक्ति आर्जन गरौं त्यसले प्रतिफल दिन्छ । गाउँगाउँमा भएको सहकारीले ऋण बचत भन्दा पनि उत्पादन मुखि क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । बजारमा बस्नेले गल्ले मानसिकता त्यागेर सामुहिक ब्यवसायमा लाग्न अनुरोध गरे । अब हाम्रो काम परिणाम मुखि मापन गर्न सकिने हुनु पर्दछ । देखिने, गणना गर्न सकिने काम हुनु पर्दछ ।
उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटस्थित त्रियुगा नमूना माध्यामिक बिद्यालय गाईघबाटको प्रागणमा त्रियुगा नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिमिरेले सो बताएका हुन । रोजगार मेलाको माध्यमबाट त्रियुगा नगरपालिकाले जुन सन्देश दिन खोजेको छ । यो नितान्त भिन्न प्रकृतिको कार्यक्रमको आयोजना गरेर नगरबासीहरुलाई श्रम प्रति सम्मान गर्ने र सबैले श्रमिक बनौं र श्रममा सामेल होऔं भन्ने सन्देश दिन खोजीएको छ ।
यो मेला मेलामा मात्र सिमित हुने छैन् यसले सार्थकता पाउनेछ । यो मेलामा ब्यवसायीहरुले मानवीय सम्शाधन खोजी राखिएको छ । बिभिन्न क्षेत्रमा ८९९ जना कामदारको माग भई आएकोले उनीहरुले आजै तुरुन्तै रोजगारी पाउने मन्त्री घिमिरेले बताए । उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा शुक्रबार आयोजित बृति परामर्श तथा रोजागर मेलामा ठाउँको ठाउँ २३ जनाले रोजगार पाएका छन् । सीप र क्षमता सुहाउदो उद्योग तथा व्यवसायमा रोजगार पाएपछि उनीहरु खुसी भएका छन् । “रोजगारको आसले मेला आउदा रोजगार पाईयो । खुसी व्यक्त गर्दै सबुरलाल चौधरीले भने धेरै खुसी लागेको छ, अब भोलीदेखि नै काममा जान्छु । मोवाईल नम्बर समेत लेखेर मेलामा बेरोजगार सूचना फारम भरेका चौधरीले केही बेरमै रोजगारदाताको फोन पाएर तुरुन्त सम्पर्कमा पुगेका थिए । पाँच कक्षासम्म मात्र पढेकाले हेल्परका लागि रोजगारी फारम भर्नु भएका उनलाई गाईघाटस्थित त्रियुगा काष्ठ फर्निचर उद्योगले ठाउँको ठाउँ रोजगार दिएको हो । उद्योगका प्रोपाईटर कृष्ण शर्माले मेलास्थलमै छोटो अन्तरवार्ता लिएपछि रोजागर पिक्का भएको हो । यही प्रक्रियाले अन्यले रोजगारी मेलैबाट प्राप्त गरेका छन् ।
नगरपालिकाका नगर प्रमुख बलदेव चौधरीका अनुसार मेलाबाट ८ सय ९९ जनाले एक हप्ता भित्रमा रोजगारी पाउन सक्ने वातावरण तय भएको छ । नीजि क्षेत्र तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत लाई समेटेर उनीहरुलाई रोजगार प्रदान गर्ने कार्यमा नगरपालिका अगाडि बढ्ने उनले बताए । नेपाल सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारालाई सार्थक बनाउन मेलाको आयोजना गरिएको र मेला युवा, विद्यार्थीहरुको विशेष उपस्थितिमा सफल रुपमा सम्पन्न भएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।
त्रियुगा नगरपालिका, त्रियुगा उद्योग वािणज्य संघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ उदयपुरको आयोजना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीप परिषद अन्तर्गतको दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना, हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा भएको मेलालाई अपेक्षा भन्दा बढि ५ हजारले अबलोकन गरेका थिए । जसमध्ये १ हजार ३ सय युवाहरुले बृत्ति परामर्श सेवा लिएका छन् भने ९ सय जनाले तत्काल रोजगारीको आव्हान गरेका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय युवाहरुले विभिन्न पेशाका तालिम लिने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला होटल व्यवसायि संघ, व्यवसायिक तालिम प्रदायक संघ १ नं. प्रदेश र त्रियुगा नमुना माध्यामिक विद्यालय समेतको सहयोगमा मेलाको आयोजना भएको थियो ।
प्रदेश सांसदहरु विमल कार्की, नारायण बुजा मगर, कला घले, अम्बिका थापा, सुनिता चौधरीले कार्यक्रमको प्रसंशा गरे । त्यस्तै उपमेयर देवीकुमारी चौधरी, उदयपुर वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्कर खड्का, गैर सरकारी संस्थाका केन्द्रिय सदस्य महेश्वरी राई, व्यवसायिक तालिम प्रदायक संघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष कृष्ण साह, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, इन्स्योर परियोजनाका उपनिर्देशक दीपकबाबु अर्यालले कार्यक्रमको औचित्य प्रकास पारेका थिए । मेलामा सीपमुलक तालिम दिने संस्थाहरुको प्रदर्शनी र तालिमबारे जानकारी, रोजगार सम्बन्धी सूचना दिइनुका साथै रोजगारदातासंग प्रत्यक्ष सम्पर्क, स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी, स्वास्थ्य परिक्षण लगायत भएको थियो ।
कोरोनाको बिरामीको उदयपुरमै उपचार हुने, यसरी तयार भयो ४० वेडको उदयपुर कोभिड अस्पताल
धनकुटालाई पराजित गर्दै उदयपुर सेमी फाईनलमा
सहकारी ठगी मुद्दामा हडीयाका दिलिपकुमार चौधरी जेल चलान
कटारीको दुर्गमगाँउ पाट्नेमा विजुली पुग्यो मेयरले गरे उदघाटन
कृषी मन्त्रीले उदयपुरबाट सुरू गरे चक्लाबन्दी खेतीको शुभारम्भ
बेल्टारमा पनि मनाइयो मदन भण्डारी जयन्ती
माडिवासमा किरात समुदायको ऐतिहासिक साकेला पार्क निर्माण हुँदै
उदयपुरका स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम, कोरोना रोकथाममा उच्च प्राथामिकता